မိုးစက်ပွင့်: ရှန်ဟိုင်းက သံမဏိနှင်းဆီ ( Life and Death in Shanghai )-၂
Shinlay 22 January 2012 at 23:12
ဖတ်လို့ ကောင်းတယ်။ ကျေးဇူးပါ။ အဲ့ဒီစာအုပ် မှာထားတယ်။
ညိမ်းနိုင် 23 January 2012 at 08:52
မြသွေးနီ 23 January 2012 at 16:28
Anonymous 23 January 2012 at 16:40
Nice story.. Thanks for translating.
Theingar Kyaw. (theingara.blogspot.com)
မကျည်းတန် 26 February 2012 at 22:10
မလည်း post အသစ်တင်ထားပါတယ်..